မဲစာရင်း မမှန်ပါကမဲလိမ်၊ မဲခိုးသည့် ပြဿနာများဖြစ်နိုင်
မဲစာရင်း မမှန်ပါက ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲလိမ်၊ မဲခိုးသည့် ပြဿနာများဖြစ်နိုင်၍ ပါတီအားလုံးအနေဖြင့် မဲစာရင်း စိစစ်ခြင်းကို အလေးထား လုပ်ဆောင်သင့်ဟုဆို
မဲစာရင်းမမှန်ပါက ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲလိမ်၊ မဲခိုးသည့်ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်၍ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး အနေဖြင့် မဲစာရင်းစိစစ်ခြင်းကို အလေးထား လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYN-FREL) မှ ဒေါ်ဇင်မာဦးက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီတစ်ခုသာ မဲစာရင်းစိစစ်ခြင်းကို တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရ ပြီး ဒေသဆိုင်ရာအလိုက် မျိုးနွယ်စုအလိုက် ပါတီများသည်လည်း မိမိတို့ဒေသ၌ မဲစာရင်းမှန်ကန်မှုရှိရေး ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဒေါ်ဇင်မာဦးက “မဲဆန္ဒရှင် မဲစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကုန်လုံးက တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ ဥပမာ ပါတီတွေအနေနဲ့လည်း ဒီသက်ဆိုင်ရာ နယ်တွေမှာ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ပြီးလှုပ်ရှားတာလည်း မတွေ့ရဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကျလို့ရှိရင် မဲလိမ်၊ မဲခိုး စတဲ့ ပြဿနာတွေက အဲဒီလိုနယ်တွေမှာ အဖြစ်များနိုင်တယ်။ ဘယ်သူမှလဲ စိတ်မ၀င်စားကြဘူးဆိုတော့လေ။ ကျွန်မတို့ မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးတယ် ဆိုတာလည်း အမြဲတမ်းပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်းလည်း မသွားနိုင်ဘူး။ ဝေးကလည်း ဝေးတယ်ဆိုတော့။ အဓိကကတော့ အဲဒီဒေသတွေ မှာ အခြေစိုက်နေတဲ့ အဲဒီဒေသလူမျိုး ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပါတီတွေကနေ အလုပ်လုပ်ရင် ပိုပြီးတော့မှ ထိရောက်တယ်။ သူတို့အတွက်လည်း ပိုကောင်းတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ဒေါ်ဇင်မာဦးက “လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ပါတီတွေက ဆောင်ရွက်တာ အရမ်းအားနည်းတယ်။ တကယ်တမ်းဆိုရင် သူတို့မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ NLD ပါတီဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး အနေအထားနဲ့ လုပ်နေတယ် ဆိုပေမယ့် တအားဝေးလံခေါင်တဲ့ ဒေသတွေကိုတော့ မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့။ သူတို့လည်း အကုန်လုံးလွှမ်းခြုံပြီး မလုပ်နိုင်ဘူး။ တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ ပါတီတွေက သူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ အများကြီးဆိုင်တယ်။ ဒါသူတို့အနေနဲ့ အဓိကလုပ်သင့်တယ်။ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဒေသမှာရှိတဲ့ ပါတီတွေက ဘာမှလှုပ်ရှားတာ မတွေ့ရဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ ပိုပြီးအားကောင်းဖို့လိုတယ်။ မဲစာရင်းတို့ဘာတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပေါ့” ဟု ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အတွင်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၇၀ ကျော် ရှိပြီး ရခိုင်၊ ဗမာ၊ လားဟူ၊ ကိုးကန့်၊ ပအိုဝ့်၊ ကယန်း၊ ကရင်၊ ၀၊ တအာင်း (ပလောင်)၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ အင်းသား၊ ကမန်၊ မြို၊ ရှမ်းနီ၊ ဓနု၊ ဇိုမီး၊ လီဆူး စသည့် တိုင်းရင်းသားများကို ကိုယ်စားပြုထားကြောင်း သိရသည်။
ကယားလူမျိုးစု ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောဒယ်နီယယ်က “မဲစာရင်းစိစစ်တာက ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးနေတာ စိတ်ပျက်သွားလို့ ဆက်မစစ်ဆေးတော့ဘူး။ ဥပမာဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကျွန်တော်တို့မိသားစု ငါးယောက်ဗျာ။ ငါးယောက်မှာ လေးယောက်မှားတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စိတ်ပျက်နေတာ။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဗဟိုကော်မတီထဲမှာ တော်တော်များများဟာ အမှားတွေ များများပါနေတော့ အကွက်ချပြီးတော့ လုပ်ထားတာလား ဆိုတာတောင် ကျွန်တော်တို့ အဲဒီလိုထင်နေတာ။ အဲဒါကြောင့် တော်တော်လေး စိတ်ပျက်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ အခက်အခဲအများကြီး ရှိတယ် အကုန်လုံး သွားလုပ်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ သိန်းပေါင်းများစွာ လိုအပ်မယ်။ ရပ်တိုင်းရွာတိုင်း စစ်ဆေးပေးမယ် အမှားတွေ ပြန်ပြင်ခိုင်းမယ် ဆိုရင်တော့ အများကြီးကုန်မယ်။ လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ ငွေအင်အား မရှိဘူးလေ။ နောက်တစ်ခါ စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာမှာ တစ်ဝက်လောက် မှားတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ” ဟု ပြောကြားသည်။
မဲစာရင်းကို ဖြစ်နိုင်ပါက ကျေးရွာတိုင်းတွင် ကပ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်ဟုလည်း ဦးစောဒယ်နီယယ်က ပြောကြားသည်။
“ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် ကျေးရွာအုပ်စုတစ်စုမှာ တချို့ဟာ ကရွာက ၁၀ ရွာအထိ ရှိတယ်ဗျ။ တစ်နေရာပဲကပ်တော့ ကျန်တဲ့ရွာတွေ အဝေးကြီးကနေ ဘယ်လိုမှ လာမကြည့်နိုင်ကြဘူး။ အဲဒါက အခက်အခဲတစ်ခု။ ဒါကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အကုန်လုံး ဒီကိစ္စတွေကို လုပ်ပေးရင် ကောင်းတာပေါ့။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုတာပေါ့” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/29/20150အကြံပြုခြင်း
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ရန် သင့် မသင့်
ဇွန် ၂၅ ရက်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ နှင့် ပုဒ်မ ၅၉(စ) ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် လုံလောက်သည့် ထောက်ခံမဲ ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ပုဒ်မ ၅၉(ဃ) တစ်ခုတည်းအတွက်သာ လုံလောက်သည့် ထောက်ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။ ပုဒ်မ ၅၉ (ဃ) ၏ မူလပြဋ္ဌာန်းချက်မှာ “နိုင်ငံတော် အရေးအရာများဖြစ်သော နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးစသည့် အမြင်များရှိရမည်” ဟူ၍ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်ချက်မှာ “နိုင်ငံတော် အရေးအရာများဖြစ်သော နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကာကွယ်ရေး စသည့် အမြင်များရှိရမည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် “စစ်ရေး” ဟူသည့် စကားလုံးနေရာ၌ “ကာကွယ်ရေး” ဟူသည့် စကားလုံး အစားထိုးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ထူးခြားမှုများစွာ မရှိလှပေ။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ (ခ) ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဇွန် ၃၀ ရက် (ယနေ့) တွင် စတင်ဆွေးနွေးမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ပုဒ်မ ၄၃၆ (ခ) နှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၃ ဦးက ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ၁၈ ဦး၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ၁၈ ဦး၊ တပ်မတော်မှ ၁၂ ဦးနှင့် အခြားပါတီများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၁၅ ဦးတို့ ဆွေးနွေးမည်ဟု သိရသည်။ မူလက ဆွေးနွေးရန်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၁၂ ဦး အမည်စာရင်း ပေးသွင်းထားခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ မဟုတ်သော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက အဓိကကျနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်မှာ ၁၆၆ ဦးဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ထောက်ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရရှိရမည်ဖြစ်ရာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ခံမဲ မရရှိပါက မည်သည့်ပုဒ်မကိုမျှ ပြင်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များအား ဗီတိုအာဏာ ပေးထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လိုလားသည့် စိတ်မရှိဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး မှန်သမျှကို ထပ်တလဲလဲ ကန့်ကွက်နေမည်ဆိုပါက ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ရန် မဲခွဲနေခြင်းသည် လည်းကောင်း မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်မျှ မရှိသည့် နည်းတူ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပခြင်းသည်လည်း ဘာမျှအဓိပ္ပာယ် မရှိပါ။ ပုဒ်မ ၅၉(ဃ) ၌ “စစ်ရေး” ဟူသည့် စကားလုံးနေရာတွင် “ကာကွယ်ရေး” ဟူသည့် စကားလုံးဖြင့် အစားထိုးရန် ကိစ္စကဲ့သို့သော အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးအတွက် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်မည် ဆိုပါလျှင် ရယ်ဖွယ်ရာသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ပြည်သူများ အချိန်ကုန် လူပန်း ဖြစ်ခြင်းသာ အဖတ်တင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရေးအတွက် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာများ အလဟဿ ဆုံးရှုံးရုံသာ ရှိလိမ့်မည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မများ ဆက်လက်ပြင်ဆင်ရာ၌ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက တစ်ဆင့်ချင်း ဆက်တိုက်ကန့်ကွက် နေမည်ဆိုလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို လွှတ်တော်အတွင်း၌ ကြိုးပမ်း၍ မရကြောင်း ပြည်သူများ သဘောပေါက် သွားကြမည်ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ အနေအထား၌ မဲစာရင်းမှားယွင်းမှု အများအပြား ပေါ်ပေါက်နေရာ လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုများ အချိန်မီ မပြုလုပ်နိုင်ပါက မဲလိမ် မဲခိုး မဲမသမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အပေါ် စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် မျှော်လင့်ချက်လည်း လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအခြေအနေများအရ ပြည်သူများ အနေဖြင့် လွှတ်တော်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးထက် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်သာပို၍ အာရုံစိုက်ရတော့မည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်အတွင်း၌ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုလည်း ထိရောက်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိ၊ ရွေးကောက်ပွဲသည်လည်း တရားမျှတမှုမရှိ ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါက ပြည်သူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသည့်အခါ လွှတ်တော်ပြင်ပ နည်းဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလာကြဖွယ်ရှိကြောင်း The Daily Eleven သတင်းစာက သုံးသပ်ရေးသား အပ်ပါသည်။
(ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေမည့် The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/2015 1 အကြံပြုခြင်း
ကိုပါကြီး(ခ) ဦးအောင်ကျော်နိုင်'သေမှ မဲပေးခွင့်ရ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/20150အကြံပြုခြင်း
မဲအသာစီးရရင် အန်တီ့ကို သမ္မတဖြစ်ခွင့်
ပိတ်ထားတဲ့ ၅၉(စ)ကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။
ကို ပယ်ဖျက်ပြီး အသစ်ရေးဆွဲရမယ်။ အထူးဥပဒေလည်းပြ
ဌာန်းနိုင်တယ်လို့ ဥပဒေပညာရှင် ဦးကိုနီကရှင်းပြပါတယ်။
အနည်းဆုံး ၁၁၃နေရာရမှ စိုးမိုးနိုင်မယ်။
၄၄၀မှာ တပ်က ၁၁၀ နေရာယူပြီးသားမို့ ၃၃၀ကျန်မယ်။
၂၂၄မှာ တပ်က ၅၆နေရာယူပြီးသားမို့ ၁၆၈ကျန်မယ်။
ဒါကြောင့် ၃၃၀နေရာမှာ ၂၂၁နေရာရဖို့ NLDကရေကုန်ရေ
ခမ်းကြိုးစားရမယ်။ ၁၆၈နေရာမှာ ၁၁၃နေရာရဖို့ စွမ်းအား
တိုင်း၇တိုင်းမှာ ၁၀၀% နိုင်ရင် ၂၀၇နေရာရပါမယ်။ ပြည်နယ်မှာတော့ တိုင်းရင်းသားပါတီ ၃၂ပါတီရှိလို့ နိုင်ချေနည်းပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ပြည်နယ်က၈၄နေရာ၊ ပြည်မ
က ၈၄နေရာမို့ ပြည်မ၁၀၀%နိုင်ရင် ၂၉နေရာလိုပါလိမ့်မယ်။
NLD၊ ဖွတ်ပါတီ+တပ်ရယ် တိုင်းရင်းသားပါတီဆိုပြီး
ဖွတ်ပါတီက တပ်၂၅%+ ၁၅%ရနိုင်ပါတယ်။
NLDအားကိုးသော တိုင်း၇တိုင်းတွင် အနိုင်ရရန် ပြည်သူများက ယခုထွက်ရှိပြီးသောမဲစာရင်းအား
မပါရင် ပါအောင်ပြန်တင် မှားတာပြင် မိမိဘက်ကလုပ်ပေး
နိုင်တာ ကူညီနိုင်တာ နိုင်ငံ့ရှေ့ရေး မိမိတို့မျိုးဆက်ပေါင်းများ
စွာရဲ့အရေးအတွက် မဲစာရင်းဝင်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါသည်။
အများစုစိတ်ထဲ အန်တီစုသမ္မတမဖြစ်တော့ဘူး၊ ဘာလို့မဲပေးတော့မလဲလို့တွေးနေကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်အောင် ကျမတို့က
မိမိရဲ့စွမ်းအား မိမိရဲ့မဲတပြားက သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်နိုင်ပါတော့မယ်။
ကျမတို့နိုင်ရမှာ ပြည်သူ ၈.၉သန်းလောက်ရဲ့မဲပါ။
မြှောက်ဖို့ ကျမတို့လုပ်ရမှာ မဲစာရင်းမှန်ဖို့တခုတည်းပါ။
ကျမတို့ညီညွတ်စွာ စည်းလုံးစွာ ယုံကြည်စွာ အန်တီစု
Credit»»» Daw Htwe Htwe Lwin
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/24/20150အကြံပြုခြင်း
ဇူလိုင် ၇ အာဏာရှင်များရဲ့ယုတ်မာမှု
အကြီးမားဆုံးလိမ်လည်မှု (သို့မဟုတ်) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ၂၅ နှစ်ပြည့်
သမိုင်း၌ အကြီးမားဆုံးလိမ်လည်မှု (သို့မဟုတ်) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီ
Written by - နေထွန်းနိုင်၊ ကျော်ဇင်ဝင်း၊ အောင်ဇော်ထွန်း
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၇ ရက်မှာ ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခု ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၂၅ နှစ် ပြည့်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိဟာ ဒီနေ့အထိဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အချိန်က ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် အာဏာလွှဲမယ်လို့ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ အာဏာမလွှဲခဲ့ပါဘူး။
ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေကိုသာ မကဘဲ ဆန္ဒမဲထည့်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ ၁၅ သန်းကျော်ကိုပါ လိမ်လည်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြီးမားတဲ့ လိမ်လည်မှုဟာ သမိုင်းမှာ တစ်ကြိမ်မျှ မရှိခဲ့ပါဘူး။
“ကျွန်တော်တို့ အပေါ်တင် မကဘူး ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စပဲ” ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်က ပြောပါတယ်။
ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်ဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုားး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) မှာ ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့သူပါ။ သူ့လိုပဲ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ် သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) က ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့သူ ဦးခွန်ထွန်းဦးက “အညာခံခဲ့ရတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
“ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့အညာခံရတယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ရလဒ်က သူတို့မနိုင်တဲ့အခါ ကတိမတည်ခဲ့တာလေ” လို့ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောပါတယ်။
ဦးခွန်ထွန်းဦးဟာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြီးရင် SNLD က ၂၃ နေရာနဲ့ ဒုတိယအများဆုံး အနိုင်ရတဲ့ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။
"ရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အဲဒီအချိန်က တပ်မတော်၊ စစ်အစိုးက အာဏာကို လွှဲမပေးချင်တဲ့အခါ ထုံးစံအတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို ပျက်ပြယ်သွားအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တာပဲ” လို့ပအို့ဝ် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PNLO) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းဟာ NLD ပါတီ ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ သထုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) က ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ရွေးချယ်ခံရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ချိန်မှာ သူ့အသက်က ၂၇ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ထောင်ကျခဲ့တယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ပြန်လွတ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ သူဟာ အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြိုးစားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ PNLO ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေပါပြီ။
“သူတို့က စကားကို ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်ပြောတယ်။ လုပ်မယ်ပြောပြီး မလုပ်ဘဲ ကတိဖောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီဥစ္စာတွေက မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စပါ..” လို့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ကနေ NLD ကိုယ်စားပြု ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဦးစောနိုင်းနိုင်းက ပြောပါတယ်။
■ နောက်ကြောင်းပြန် ရွေးကောက်ပွဲသမိုင်း
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ပွဲကို ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှာ လုပ်ပါတယ်။ ဒိုင်အာခီရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနှစ်ရပ်နဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို နှိုင်းယှဉ်လို့ မရပါဘူး
လွတ်လပ်ရေးမရခင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့ လုပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ၁၉၅၆ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွေမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေက အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ အာဏာရယူဖို့ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်အထိ ရွေးကောက်ပွဲတွေ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ပြန်စခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ကောင်စီ အဆင့်ဆင့် အတွက် လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကို အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက လုပ်ခဲ့တာဖြစ်သလို ရိုးဖြောင့်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။
စစ်ဝတ်စုံချွတ်၊ အရပ်ဝတ်ပြောင်းပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ပဲအရွေးခံခဲ့ရသလို မနိုင်နိုင်အောင်လည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ၂၀၁၀ ပြည့်လွန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းပုံစံတွေနဲ့ များစွာကွဲပြားမှု မရှိဘူးလို့ သုံးသပ်သူတွေ ရှိပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်း တော်လှန်ရေး ကောင်စီအစိုးရကနေ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) ခေတ်ကို ဦးနေ၀င်းက ဦးဆောင်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ အရှေ့တောင် အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံး ဘ၀ကနေ အဆင်းရဲဆုံး ဖြစ်သွားတာကလွဲလို့ ပြည်သူတွေအတွက် ဘာမှအကျိုးမထူးခဲ့ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးအရ ချွတ်ခြုံကျခဲ့တဲ့ Economic Bankrupt နိုင်ငံဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းခေတ်က ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ နိဂုံးချုပ်သွားပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြောင့် ဦးနေ၀င်းအစိုးရ ပြုတ်ကျခဲ့တာပါ။
ဦးနေ၀င်းအစိုးရ ပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းယူမှု နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေနဲ့ အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန့်တို့ဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့ အဓိက ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စစ်အာဏာ သိမ်းယူပြီး နောက်တစ်ရက်ကစလို့ အာဏာကို ပြည်သူ့ထံ ပြန်လည်အပ်နှင်းမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ချိန်မှာ NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အပြတ်အသတ် နိုင်သွားပါတယ်။
ဒီအခါ ၂၅ နှစ်ကြာ သမိုင်းမှာ အကြီးဆုံး လိမ်လည်မှုကြီး ဖြစ်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိဖျက်မှု ပေါ်လာပါတော့တယ်။
■ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိဘာလဲ
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိက ရှင်းပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့သူကို အာဏာလွှဲပေးရေး ဖြစ်ပါတယ်။ အနိုင်ရသူကို အာဏာလွှဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို အာဏာသိမ်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကပဲ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပြီး နောက်တစ်ရက် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ခေါ်ယူပြီး အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အစည်းအဝေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအစည်းအဝေးကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ခင်၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်စိန်အောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်ဆွေ၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်မှူးတင်ဦးတို့ တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကော်မရှင်ဘက်က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘဌေး အပါအ၀င် ဦးစောကြာဒိုး၊ ဦးစန်းမောင်၊ ဦးကျော်ညွန့်နဲ့ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးမောင်တို့ တက်ပါတယ်။
တပ်မတော်ဟာ ကြားနေမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေ လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မျှတစွာနဲ့ အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်က မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေထွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် အချိန်ဇယားကို ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေထွက်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်ကနေ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်အထိ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၃၆ ဖွဲ့ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောင်မောင်ရဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် တိုင်းပြည်သို့ တင်ပြချက်ကို ပြန်ကြည့်ရင် တပ်မတော်က အာဏာကို ရေရှည်ဆုပ်ကိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် အာဏာလွှဲပေးမယ် ဆိုတာကို ပြောခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် မတ် ၂၇ ရက်မှာ လုပ်တဲ့ ၄၄ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်က ဒါကိုအတိအလင်း ထပ်ပြောပါတယ်။
“တို့တပ်မတော်ရဲ့ ဒုတိယမြောက် အရေးကြီးဆုံး တာဝန်က နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးတာဝန် ဖြစ်တယ်”
“... ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် လိုအပ်တာတွေ ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက် ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဥပဒေနဲ့အညီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရသစ် ပေါ်ပေါက်လာမှာ ဖြစ်တယ်”
“အဲဒီအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ဆက်လက်ဦးဆောင်သွားရာမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အစွမ်းဆောင်နိုင်ဆုံး ဖော်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားတယ်။ တို့တပ်မတော်ားတွေ အဖို့တော့ စစ်တန်းလျားကို ပြန်သွားပြီး တို့ရဲ့မူလအဓိက တာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ အခုပြောကြားရာမှာ ပါဝင်တဲ့ တာဝန်ကြီးတွေကို ဦးလည်မသုန် ဆက်လက်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားရမှာပဲ ဖြစ်တယ်”
ဒီစကားရပ်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကိုယ်တိုင် လူသိရှင်ကြား ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၅ ရက်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ပြောခဲ့တာ ရှိပါတယ်။
“... ကျွန်တော် ဒီနေ့ နိုင်ငံတော် အာဏာကို ယူထားတဲ့အခါ မှာ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ မဖြစ်စေရဘူး။ ကျွန်တော် စည်းနဲ့ စနစ်နဲ့ လုပ်သွားတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် လွှတ်တော်ကို၊ လွှတ်တော်ပေါ်လာရင် ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ကျွန်တော် လွှတ်တော်ကို တင်ပြမယ်...” လို့ သူက ပြောခဲ့တာပါ။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီ ၉ ရက်မှာ နိုင်ငံတော် အာဏာလွှဲရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
“နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း တို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောပြီးပြီပဲဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ အစိုးရ ဖွဲ့ကြ၊ ယူကြပေါ့။ အဲဒီ အစိုးရဖြစ်လာအောင် ရွေးကောက်ပွဲက လုပ်ပေးရမှာပဲ။ ဒါက တို့တာဝန်ပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် တရားဥပဒေအရ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ကတော့ တို့တပ်မတော် တာဝန်မဟုတ်ဘူး။ ဒါအတိအလင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အခုကတည်းက ပြောထားတာပဲ ဖြစ်တယ်...”
“.... အခုတစ်မျိုး၊ အခုတစ်မျိုးဆိုရင် ကတိမတည်၊ ကတိမတည်လို့ရှိရင် သံသယစိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာမျိုးတော့ တပ်မတော်အနေနဲ့ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ အစိုးရဆိုတာကလည်း တိုင်းသူ ပြည်သားအများစုရဲ့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ တပ်မတော်ဟာ အစိုးရ အောက်မှာပဲ ရှိရမယ်...”
ဒီစကားတွေကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် နည်းတူ နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န၀တ)၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စီ (နယက) ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့ (အဲဒီအချိန်တုန်းက) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့လည်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကတိတွေ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
■ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိဘယ်လို ဖျက်လဲ
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးချိန်မှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအတိုင်း လွှတ်တော်မခေါ်ခဲ့ပါဘူး။
အာဏာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဟာ အာဏာလွှဲဖို့ မဟုတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဖို့သာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကတိဖျက်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်အချိန်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကိစ္စကို နှစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စ ပြောလာတာတွေကိုလည်း လက်မခံဘဲ ရွေးကောက်ပွဲသာ အဓိကလို့ သူက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးချိန်မှာတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ ရေးဆွဲရေးက အဓိက၊ အာဏာလွှဲရေးက အဓိက မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်စဉ်မှာ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အခြေခံဟာ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရသူကို အာဏာလွှဲပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် အပါအ၀င် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲထားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်လိုက်ပါတယ်။
“ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ။ အဓိက က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက် ပွဲပေါ့။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ အာဏာသုံးရပ်ပေါ့။ ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ တရားစီရင်ရေးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ဒီအာဏာသုံးရပ်ရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲပါ” လို့ ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်က ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီအချိန်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိစ္စ အရေးမကြီးဘူး၊ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြိုက်တာကို ယူသုံးလို့ရတယ်၊ အသစ်ရေးချင်လည်းရေး၊ ပြင်ချင်လည်း ပြင်လို့ရတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မရှိဘဲ ဘယ်လို အာဏာလွှဲရမှာလဲလို့ သူက ပြောင်းပြောပါတယ်။
“၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဧည့်ခံပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ကို ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို သူပြောနေကျ စကားအတိုင်းပဲ သူပြောတာက ဦးခွန်ထွန်းဦးတဲ့။ သမိုင်းမှာ ကျွန်တော် တရားခံ မဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ဒါခင်ဗျားတို့ ဆက်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စ၊ ၄၇ ယူယူ၊ ၇၄ ယူယူ၊ အသစ်ပဲ ရေးရေး ဆိုပြီးတော့ ပြောသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ ၁/၉၀ ကျမှ ကျွန်တော်တို့ အမြောက်နဲ့ပစ်ခံရပြီးတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲသည် အာဏာအပ်နှင်းရန် မဟုတ်၊ constitution ရေးရန်သာဖြစ်သည်။ ဆိုတော့ ဖြစ်ပြန်ရော၊ အဲလို ဖြစ်ရောဗျာ...” လို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထောင်က ပြန်လွတ်ချိန် Weekly Eleven သတင်း ဂျာနယ်နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဦးခွန်ထွန်းဦး ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
“န၀တဥက္ကဋ္ဌ နောက်ဆုံးပြောတဲ့ မိန့်ခွန်း၊ သူက ပြောသေးတယ်။ အခုရွေးချယ်ခံရတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဘာလုပ်ဖို့လဲတဲ့။ ဥပဒေရေးဆွဲဖို့ပေါ့တဲ့။ ရေးပါတဲ့။ လွှဲမယ်၊ လွှဲမယ်နဲ့ နောက်ဆုံး သူရူးတယ်လို့ အနားပေးမခံရခင် တော်လှန်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်းမှာ အဲလိုပြောတယ်။ (ရွေးကောက်ပွဲကို) လူသိရှင်ကြား ကမ္ဘာသိကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက သူတို့စကားတွေကို ပေါက်ကရ၊ ဟိုပြော ဒီပြော ပြောပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးတယ်။ လွှတ်တော်မခေါ်ပေးဘူး။ အဲဒီမှာ လွှတ်တော်ပေါ်ဖို့ ကိုယ့်ဘာသာကြိုးစားတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ အများကြီး ဖမ်းလိုက်တယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရော၊ NLD ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေရော အများကြီး ထောင်ကျခဲ့တယ်” လို့ ဦးစောနိုင်းနိုင်းက ပြောပါတယ်။
“အဲဒီတုန်းက ၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ (ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ) ရဲ့ ပုဒ်မ ၃ အရ လွှတ်တော်ခေါ်ပေးရမယ့် တာဝန်အာဏာပိုင်တွေမှာ ရှိတာပေါ့။ ဒါဥပဒေအရ ရှိတာနော်။ နောက်တစ်ခုက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းတွေအရ လွှတ်တော် ခေါ်ပေးရမှာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကတိက၀တ်တွေနဲ့ အဲဒီဥပဒေတွကို ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။ မခေါ်ပေးခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ခု ၁/၉၀ ကြေညာချက်ထုတ်တယ်။ ၁/၉၀ ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရမယ့် တာဝန်ရှိတယ် ဆိုပြီးတော့ တစ်ခါလုပ် ပြန်ရော။ အဲဒါနဲ့ ၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တွေက အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ခေါ်ယူပေးခြင်း မခံရဘဲနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ရေးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ဘက် ရောက်သွားတယ်” လို့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဓနုဖြူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) မှာ ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက် ပွဲမှာ ဦးဝင်းမြင့်က NLD ပါတီ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် ၀င်ပြိုင်ခဲ့သလို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ပုသိမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်က ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရထားတဲ့ လက်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီစစ်အစိုးရအနေနဲ့က ရလဒ်ကို ချေဖျက်လိုက်တာဟာ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တဲ့လူထုကို စော်ကားလိုက်တာပဲ။ သမိုင်းမှာ အနိဋ္ဌာရုံတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အတွက်လည်း အကျိုးမရှိသလို၊ ကျွန်မတို့လည်း ပြည်သူတာဝန်တွေကို အခုထိ မထမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ကျွန်မတို့ ကျေကျေနပ်နပ်သူတို့ ရချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်မပေးရသေးပါဘူး။ အမှန်တော့ သမိုင်းမှာ မဖြစ်သင့်တဲ့ အနိဋ္ဌာရုံဖြစ်တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း ဒီကိစ္စက မဖြစ်ခဲ့ဘူး” လို့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မဲ ဆန္ဒနယ်က ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဒေါ်စန်းစန်းက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်စန်းစန်းဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီးတာကို တိမ်းရှောင်ရင်း ပြည်ပကို ရောက်ရှိသွားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပကို ရောက်ရှိချိန်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့သလို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
န၀တ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကတိကို ဖျက်ခဲ့တာတင် မကပါ ဘူး။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၇ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် ၁/၉၀ ပါ အချက်ကိုလည်း ထပ်မံဖောက်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။
■ ၁/၉၀ ပါ အချက်ကို ထပ်မံဖောက်ဖျက်
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လက်မှတ်ထိုးပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ ၁/၉၀ ကြေညာချက်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အာဏာလွှဲမပေးဘူး ဆိုတာကို အတိအလင်း ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာ အာဏာသုံးရပ်လုံးကို စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဆက်ကိုင်ထားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“အာဏာလွှဲမပေးချင်တဲ့ အခါမှာ တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်လို့ မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်အဆင့်လောက်ကို သူတို့က ချပြတယ်။ ချပြပြီးတော့သူတို့က နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ ခေါ်ပြီးတော့ ၁/၉၀ ကို လက်ခံပါတယ် ဆိုပြီးတော့ အတင်းအကျပ် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ အဲဒီလိုထိုးခိုင်းတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အာဏာလွှဲပြောင်းတဲ့ အဆင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားပြီးတော့ ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအသစ်နဲ့ နောက်ရွေးကောက်အသစ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် သူတို့က ဖန်တီးကြတယ်။ ဒီအမိန့်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကိုယ်တိုင် ထုတ်ခဲ့တာ။ အဲဒါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဘာထပ်လုပ်လိုက်လဲ ဆိုတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဖမ်းတယ်ဆီးတယ်။ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး တောင်းဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေပေါ်မှာ အစိုးရက နည်းနည်းလေးမှ သည်းမခံဘဲနဲ့ လွှတ်တော်ပေါ်ပေါက်ရေးကို ကြိုးပမ်းတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အကုန်လုံးကို နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်တွေပေါ့နော်။ နှစ်ကြီးထောင်ဒဏ်တွေပေါ့” လို့ ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်က ပြောပါတယ်။
န၀တအစိုးရရဲ့ ၁/၉၀ ကြေညာချက်ဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ဂန္ဒီခန်းမဆွေးနွေးမှုတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၉ ရက်စွဲနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဂန္ဒီခန်းမ ကြေညာစာတမ်းက အာဏာလွှဲမပေးတဲ့ န၀တအစိုးရကို အထိနာစေခဲ့ပါတယ်။ အချက် ၁၃ ချက်ပါဝင်တဲ့ ဂန္ဒီကြေညာစာတမ်းရဲ့ အဓိက တောင်းဆိုမှုက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်သတ်မှတ်ချက်ပေးပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်တဲ့ အာဏာလွှဲပြောင်း နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို NLD က ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရေးဆွဲထားတဲ့ ယာယီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) နဲ့ အာဏာလွှဲပြောင်းရေး လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အားလုံးလက်ခံတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ ခြေလှမ်းပြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို န၀တက လက်မခံပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့သာ ဖြစ်တယ်၊ အာဏာရယူရေးအတွက် ယာယီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲပြီး အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်မခံဘူးလို့ ၁/၉၀ ကြေညာချက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁/၉၀ ကြေညာချက်မှာပဲ အချက်တစ်ချက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
“ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ တွင် ‘လွှတ်တော်ကို မဲဆန္ဒနယ်များမှ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်’ ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းပါရှိသည်။ ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းခြင်းကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေးမည်” ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကလည်း အခုချိန်ထိ လုံးဝ ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့ဆိုပြီး န၀တ အစိုးရက အမျိုးသား ညီလာခံခေါ်ယူပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ် ၇၀၀ ကျော် တက်ရောက်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ ကျော်ပဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒါဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၄၈၅ ဦးထဲက ၁၀၀ ကျော်ပဲ ပါဝင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်) န၀တအစိုးရ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေက ၆၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အမျိုးသားညီလာခံကို စွန့်ခွာသွားတဲ့ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
“တကယ်တက်ကြွတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ထောင်ထဲထည့်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသား ညီလာခံကို ကျင်းပတယ်။ အမျိုးသား ညီလာခံဆိုတာက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့ ဆိုပြီးတော့ အခြေခံမူတွေ ချမှတ်ပြီး လုပ်တယ်။ အမျိုးသား ညီလာခံကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြန်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အစုတစ်စု အနေနဲ့ ဖွဲ့ထားပြီးတော့ သူတို့လိုလားတဲ့ သူတွေအများစု ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့လိုက်တယ်။ အစုအဖွဲ့ ရှစ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့သူတွေက တစ်စုပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ခုနစ်စုက သူတို့ရွေးထားတဲ့ သူတွေကြီးပဲ။ အဲဒီတော့ အမျိုးသား ညီလာခံမှာ ဘယ်လိုပဲ တင်ပြ တင်ပြ၊ ဘယ်လိုပဲ မဲခွဲမဲခွဲ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကိုယ့်ရဲ့သဘောထား အမှန်ကို ဆောင်ရွက်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လိုချင်တာဖြစ်အောင် လုပ်သွားတယ်” လို့ ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်က ဆိုပါတယ်။
“ညီလာခံကြီးက ဆွဲလာသလောက်လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ အချိန်တွေသာ ကုန်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ NLD က ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆ လောက်မှာ ထွက်လာလိုက်တယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တိုင်းရင်းသားအတွက် ဘာမှမပါတဲ့အတွက် ဆိုပြီးတော့ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ NLD လည်း ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်း မပြည့်မီဘူးဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ ထွက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ စာနဲ့တော့ သမိုင်းမှာ အပြောမခံတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီးတော့ ညီလာခံက ထွက်ခဲ့တာပဲ” လို့ ဦးခွန်းထွန်းဦးက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသားညီလာခံ ရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ န၀တအစိုးရကို နယက အစိုးရအဖြစ် ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ နာမည်သာ ပြောင်းပြီး လူမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နဲ့ ပေးထားတဲ့ ကတိတွေကိုတော့ န၀တနာမည်နဲ့အတူ ပြည်ဖုံး ကားချလိုက်ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံ ခုနစ်ချက်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ လမ်းပြ မြေပုံ ခုနစ်ချက်နဲ့အတူ အမျိုးသား ညီလာခံကိုလည်း ပြန်စပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ထိန်းသိမ်းခံရပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှာ အမျိုးသား ညီလာခံကို အပြီးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေ ၂၉ ရက်မှာ ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ပါတယ်။ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သူ ၉၈ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းထဲက ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံမဲပေးခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
“အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြာရှည်ဆုံးပဲဗျာ။ နောက်ဆုံးကျတော့လည်း နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ ကမန်းကတန်း တက်သုတ်ရိုက်ပြီး ဥပဒေတစ်ခု ထွက်လာတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါက လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဥပဒေပဲ။ ဒါက ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူးဗျာ” လို့ ဦးစောနိုင်းနိုင်းက ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ထပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကတစ်ဆင့် အာဏာရယူခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် န၀တအစိုးရဟာ ပထမအချက်အနေနဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကတိ မတည်ခဲ့ဘူး၊ အာဏာလွှဲမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ အချက်က ၁/၉၀ ကြေညာချက်ပါ “လွှတ်တော်ခေါ်ယူ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ်” ဆိုတဲ့ အချက် ကို ထပ်ပြီးဖောက်ဖျက်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်ပြီး အမျိုးသားညီလာခံကို ပြုလုပ်တယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲပြီး နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ၉၀ ရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်က နောက်ဆုံးသိရတဲ့ အချက်အလက်တချို့အရ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ပြန်မလွတ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ ဦးထက်မနည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့သူ ၄၄ ဦး ထက် မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကွယ်လွန်သွားသူ ၁၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။
သေချာတဲ့ အချက်က ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ NLD ပါတီဝင်တွေ အပါအ၀င် ရွေးကောက်ခံရသူ အများစုကဟာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ပုဒ်မမျိုးစုံနဲ့ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံရပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့အားလုံး နိုင်ငံရေးအရ ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် နှိပ်ကွပ်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။
■ နင်းခြေခံခဲ့ရသော ပြည်သူ့ဆန္ဒ
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိဖျက်ခဲ့တာက ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်သာ သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အပေါ်မှာပါ သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ မဲတွေအခိုးခံခဲ့ရတယ်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေ နင်းခြေခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“၁၉၈၈ က စပြောရရင်တော့ တကယ်လူထုတွေက အပြောင်းအလဲ တစ်ခုအတွက် တကယ်ပြင်းပြပြီး ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုပေါ့။ အဲဒီ ကနေ ၉၀ ပြည့်နှစ် ရလဒ်ရတာကို။ လွယ်လွယ်ကူကူတော့ မဟုတ်ဘူး။ လူထုတွေက ပြင်းပြတယ်။ အပြောင်းအလဲ လိုချင်တယ်။ လူထုတွေရဲ့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးတဲ့ မဲကိုရခဲ့တာပါ။ ဒီလိုလူထုဆန္ဒအမှန် အစစ်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ လက်ရှိ အစိုးရကဒါကို လက်မခံကြဘူး” လို့ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘားအံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)မှ NLD ကိုယ်စားပြုအဖြစ် ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
“ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဒီမိုကရေစီ လိုလားတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေတွေကို မသိကျိုးကျွံ လုပ်ရုံတင်မက ဖျက်လိုဖျက်ဆီး အချိန်ကြာရင် မေ့သွားမယ်၊ ပျက်သွားမယ် လုပ်ပြီးတော့ အခုထိ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မရောက်တော့ဘူးဗျာ” လို့ ဦးစောနိုင်းနိုင်းကလည်း ပြောပါတယ်။
“၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတိုင်း အာဏာလွှဲပေးခဲ့ရင် အခုလို ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ အခုချိန်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲ လေးကြိမ်၊ ငါးကြိမ်ဖြစ်လာပြီးတော့ ပြည်သူတွေရော၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေရော ဒီမိုကရက်တစ် အတွေ့အကြုံတွေရမယ်။ ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံထက်အများကြီး တိုင်းရင်းသားတွေပါ လက်ခံနိုင်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံတို့ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံရေးဆွဲတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ ဖြစ်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်က အခုထက်များစွာ တိုးတက်တဲ့ အနေအထား ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်တယ်” လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ (CRPP) မှာ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးအေးသာအောင်က ပြောကြားပါတယ်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းခံရပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒဟာ အကြိမ်ကြိမ် လျစ်လျူရှု ခံခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် နင်းချေခံခဲ့ရတာကတော့ အဆိုးဆုံးပါပဲ။ ဒီအတွက်လည်း တာဝန်ရှိသူများဘက်က ၀န်ခံပြောဆိုတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဦးနေ၀င်းခေတ်မှာ တိုင်းပြည်ဟာ စီးပွားရေးအရ ချွတ်ခြုံကျသွားတယ်။ ဦးနေ၀င်း အမွေဆက်ခံ ခဲ့ကြသူတွေက ၁၉၉၀ ပြည့် နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ငြင်းပယ်ပြီး ကိုယ်ထင်ရာ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျရာကနေ နာလန်မထူ ကျဆုံးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံမှာ နောက်ဆုံး ရောက်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
အခု ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ အချိန်ငါးလခန့်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒီအတွက် ကတိက၀တ်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ရသေးပါဘူး။
ဒီအချိန်မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလို ကတိဖျက်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ...... ။
ကိုးကား။ ။ (၁) ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်း (မြန်မာ့အလင်း အောင်သန်း) ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ (၂) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၇ နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်း (ခင်ကျော်ဟန်) ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ (၃) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ (ခင်ကျော်ဟန်) ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ (၄) မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အနှစ်ချုပ် (၁၉၉၁ ခုနှစ်)၊ (၅) ၁၉၈၉ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် လုပ်သား နေ့စဉ်သတင်းစာများ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/20/20150အကြံပြုခြင်း
NLD ပါတီကနေ ဝင်ရောက်အရွေးခံမယ့် လွှတ်တော်အမတ်လောင်းတွေဟာ ကာယကံရှင်နဲ့ ခင်ပွန်းဇနီးသည်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၁၈နှစ်အောက် သားသမီးတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ရှိတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင် ဘဏ်စာရင်းတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြရမယ်လို့ ၂ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ဟာ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်ရတာဆိုတာ အမတ်လောင်းတွေ သိဖို့လိုပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအပြောင်းအလဲတွေရှိလာလို့ NLD ပါတီက စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်ပူးပေါင်းပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကတိလက်မှတ် ရေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီး အမတ်လောင်းကိုတော့ တကယ်တော်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သူကိုသာ ရွေးမယ်လို့ ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
Photo : NLD Chairperson
News : Kamayut Media
ဇွန် ၁၉ ရက်နေ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ အောင်သောင်း ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲမှာ ၈ တန်းကျောင်းသူလေးက အစအဆုံး ယပ်ခပ်ပေးနေရ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/20/2015 1 အကြံပြုခြင်း
အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ဘတ်ဂျက်ငွေအသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်သုံးစွဲထားသည်ဆိုသော်လည်း၊စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်အားလုံး၏ လေးရာခိုင်နှုန်းပင်မပြည့်ချေ။ ယင်းအသုံးစရိတ်ငွေသည် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် လုံလောက်နိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိကို ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေသက်ခင်နှင့် ယခုလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဖြူသစ်လွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်း သည။်
ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ယောက်ကို ၁၄ဒေါ်လာ သုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့က ဒေါ်လာ၈ဝဝဝလောက် သုံးတယ်
Question:: WHO ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နှုန်းတွေ၊ သေဆုံးမှုနှုန်းတွေဟာ မြင့်တဲ့အထဲမှာ ပါနေသေး တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာဘယ်လိုမှတ် ချက်ပေးချင်ပါသလဲ။
Answer :: ကျတော့ ကျလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ကျအောင်လုပ် ဖို့လိုနေတယ်ပေါ့။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂ဝ က မိခင်သေ ဆုံးမှုနှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် လူတစ်သိန်းမှာ ၅ဝဝ၊ ၆ဝဝ ကျော်လောက်ရှိတယ်။ အခုဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ၂ဝဝနဲ့ ၂ဝဝအောက်ကို ကျလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံ တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ တွေနဲ့ယှဉ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက များနေသေးတယ်။ သဘော ကတော့ ဒီထက်ကျအောင် လုပ်လို့ရသေးတယ်။ လုပ်ဖို့ လည်း လိုအပ်သေးတယ်။ တိုးတက်မှုမရှိဘူးမဟုတ်ဘူး၊ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်တွေမှာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်တစ်သိန်းမှာ ဆယ်ဂဏန်း၊ ခုဂဏန်းကိုရောက်သွား ပြီ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ၂ဝဝလောက်တင်နေတုန်းပဲ။ များနေ တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်သိန်းမှာ ၆ဝဝ လောက် သေခဲ့တာက နေ ဆင်းလာတာဆိုရင်တော့ တိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတိုးတက်မှုသည် ကျေနပ်ဖွယ်ရာကောင်းသော တိုးတက်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီးကျဆင်းအောင် လုပ်ရဦးမယ်။ ကလေးသေဆုံးနှုန်းကအစ ကျဆင်းလာတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျအောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ် နေသေးတယ်။
နောက်ပြီး နည်းလာတာ၊ များနေသေးတာ ငြင်းနေလို့ ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ သေနှုန်းနည်းရင် ပြန်များမလာအောင် ထိန်းထားမယ်။ ဒီထက်နည်းအောင်လုပ်မယ်။ မသေသင့် တာတွေကို မသေအောင်လုပ်မယ်ပေါ့။ နည်းတယ်၊ များ တယ် အခြေခံနေရင်းနဲ့လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ရင် ဆက် သေနေမှာပေါ့။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကိုတော့ လုပ် ရမယ်။
Question:: ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်ဟာ ဘတ်ဂျက်သုံးငွေ စုစုပေါင်းရဲ့ သုံးရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ အနည်းဆုံး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဆရာရေ ဒီအပေါ်မှာ သုံးသပ်ပေးပါ။
Answer::ဒီနှစ်မှာ ဘီလီယံ ၇ဝဝ ကျော်သုံးနေတယ်လို့ပြော ကြားထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိသလောက်ပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ အခြေခံနှစ်တွေပေါ့။ အစိုးရဘတ် ဂျက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရကကျခံတဲ့ ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၇၄ ဘီလီယံလောက်ပဲသုံး တယ်။ အထွေထွေကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ပေါ့။ အစိုးရ ကျခံမှုက နှစ်ဒေါ်လာနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ကျခံတာရော၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ အလှူရှင်တွေကျခံတာရော လူတစ်ယောက် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်က အဲဒီတုန်းက ၁၄ ဒေါ်လာ လောက်ပဲရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံက တစ်ယောက်ကို တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ၈ဝဝဝကျော်လောက် ရှိတယ်။ အစိုးရကချည်း ၈ဝဝဝ ကျော်လောက်စိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ယောက်ကို ၁၄ ဒေါ်လာသုံးတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က ၈ဝဝဝ လောက်သုံးတယ်။ ယူရိုမှာရှိတဲ့ လူဇင်ဘတ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံမှာဆိုရင် အစိုးရကချည်းပဲ လူတစ်ယောက်အတွက် ကို တစ်နှစ်ကျန်းမာရေးအတွက် ဒေါ်လာ၈ဝဝဝကျော် လောက်စိုက်တယ်။ သူက အစိုးရက စိုက်ထုတ်မှုအများ ဆုံးပေါ့။
Question::ဒီလိုနိုင်ငံတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းအခြေအနေ ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်။
Answer::ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင် ပိုက်ဆံများတိုင်း ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်လာတယ်လို့ ပြောလို့ တော့မရဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကို ကြည့် မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ စီးပွား ရေးအကောင်းဆုံး၊ဂျီဒီပီအများဆုံးပါ။ သူတို့ဂျီဒီပီရဲ့၁၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာ ကျန်းမာရေးအသုံး စရိတ်သုံးတယ်။ စင်ကာပူသည် အမေရိကလောက် မချမ်း သာဘူး။ သူ့အသုံးစရိတ်က ဂျီဒီပီရဲ့ လေးရာခိုင်နှုန်းပဲရှိ တယ်။ ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူရဲ့ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းက အမေရိကထက်မြင့်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမေရိကမှာ လူဦး ရေသန်း ၄ဝ ကျော်ဟာ ကျန်းမာရေးအာမခံ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို မဟုတ်ဘူး။ ကျွန် တော်တို့နိုင်ငံက အာမခံထားထား၊ မထား ထား ဆေးရုံလာရင်ကုပေးတယ်။ ဟိုမှာက အာမခံမရှိရင် ဘယ်ဆေးရုံကမှမကုဘူး။ ဒီ တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်အများဆုံး နိုင်ငံမှာ သန်း ၄ဝ ကျော်ဆေးကုသမှု ခံစားပိုင် ခွင့်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံများတိုင်း ကျန်း မာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်တယ်လို့တော့ ပြော လို့မရဘူးပေါ့။ တိုက်ရိုက်တော့ အချိုးမကျဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၁၄ဒေါ်လာဆို တာဟာ အဲဒီအခြေခံနှစ်မှာ နည်းလွန်းအား ကြီးတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကမ္ဘာပေါ် မှာ အစိုးရရဲ့ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံသည် ၁ဝ၊ ၁၁ ဒေါ်လာမှာပဲ။ ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် အနည်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ ကျန်းမာ ရေးအသုံးစရိတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ထက်နည်းတဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ၁၄ ဒေါ်လာသုံးတယ်ဆိုမှ သူတို့က အထွေထွေ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်က ၁၂ဒေါ်လာပဲရှိ တယ်။ အဲဒီတော့မနှစ်ကဘတ်ဂျက်ကြည့်ရင် သန်း ၅ဝဝ ကျော်၊ ဒီနှစ်သန်း ၇ဝဝကျော် လူ ဦးရေနဲ့တွက်ရင် ၁၁ ဒေါ်လာ၊ ၁၂ဒေါ်လာ လောက်ဖြစ်သွားပြီ။ နှစ်ဒေါ်လာကနေတက် လာတာဒီအစိုးရသက်တမ်းမှာ ၁၂ဒေါ်လာ လောက်အထိ။ ဒါပေမဲ့လူဦးရေကဂဏန်းမငြိမ် တော့ ဒါလေးကတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒီနှစ်မှာ တစ် ဦးချင်းကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကို အစိုးရရဲ့ ကျခံမှုဟာ အခုဘီလီယံ ၇ဝဝ ဆိုရင်၁၄ဒေါ် လာလောက်အထိဆိုတော့ အဲဒီနှစ်နဲ့စာရင် တော့ အသုံးစရိတ်တိုးလာတယ်လို့ ပြောလို့ရ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့သတ် မှတ်ချက်က အနိမ့်ဆုံးတစ်ယောက်ကို ၄၅ ဒေါ်လာလောက်သုံးမှ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ အဆိုပြု ထားတယ်။ ဒီလိုပြောရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော်က တိုး တက်သုံးစွဲလာပေမယ့်လည်း မမီသေးဘူးလို့ ပြောရမယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအသုံး စရိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘတ်ဂျက်ရဲ့လေးရာ ခိုင်နှုန်း မပြည့်ဘူး။
အခု အာဖရိကနိုင်ငံတချို့က ၁၅ ရာခိုင် နှုန်းလောက် သုံးဖို့လုပ်နေတယ်။ အမေရိကဆို ရင် အစိုးရဘတ်ဂျက်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း ၃ဝလောက် အထိ သုံးကြတယ်။ ဒီဂျီဒီပီကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ ၁၅ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၇ရာခိုင်နှုန်းတောင်သုံးသေး တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ဂျီဒီပီရဲ့တစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းပဲ သုံးတယ်။ အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ ဂျီဒီပီနဲ့ မတူဘူး။ တစ်မျိုးသားလုံးထုတ်ကုန် တန်ဖိုးရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက် ဝန်းကျင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့က သုံးတယ်။ ဒီ တော့ အများကြီးတော့ တိုးတက်သုံးလာတယ်။ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ပမာဏကိုတော့ မသုံး နိုင်သေးဘူး။
Question::လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို မပြည့်မီသေးတဲ့အတွက် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အဓိကဦးစားပေးသုံးစွဲ ဖို့လိုပါသလဲ။
Answer::ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းတွေ မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဦးစားပေးမှန်ဖို့၊ အလေ အလွင့်နည်းဖို့၊ မကုန်သင့်တာမကုန်ဖို့ လုပ်ရ မယ်။ အရေးကြီးတာက ဒါပဲ။ ဦးစားပေးမှန် တယ်ဆိုတာ အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေ၊ မဖြစ်မနေသုံးရမယ့်နေရာတွေမှာ မှန်မှန်ကန် ကန်သုံးစွဲဖို့လိုတယ်။ အရင်ကထက်စာရင် တိုး တက်ရရှိလာတာမှန်ပေမယ့် တကယ့်လိုအပ် ချက်ကို မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဦး စားပေးမှန်မှန်နဲ့ အလေအလွင့် မရှိအောင် တစ်ဖက်ကလည်း ကုသရေး၊ တစ်ဖက်ကလည်း ကာကွယ်ရေးပေါ့။ ရောဂါတွေကိုဖြစ်မှကုရင် ပိုက်ဆံပိုကုန်တာဆိုတော့ ဒီကာကွယ်ရေး၊ ရော ဂါနှိမ်နင်းရေးတွေမှာကအစ ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ ဥပမာ- အသားဝါဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ဟာ အပြင်မှာထိုးရင် ပိုက်ဆံကုန်တယ်။ ဈေး ကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသည်းရောင်ရင် အဲဒါ ထက် ပိုကုန်မယ်။ တကယ်ရောဂါဖြစ်ရင် အဲဒါ ထက် ပိုကုန်တယ်။ သေလည်းသေနိုင်တယ်။
နောက် ကျွန်တော်တို့လူတွေက နေ ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီထက် ပိုကောင်း အောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်။ နေ မကောင်းမှပဲ ကုတော့တယ်။ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ အစား အသောက်၊ အနေအထိုင်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစား၊ အဆီတွေလျှော့ဖို့၊ အချိုတွေလျှော့ ဖို့၊ အငန်တွေလျှော့ဖို့ကိစ္စတွေ၊ ကျန်းမာရေး နှင့်ကိုက်ညီသော အစားအသောက်တွေကို၊ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေကို အလုံအလောက်စားဖို့ဆိုရင် ဒါတွေကပြော မယ်ဆိုရင် အများကြီးပဲ။ ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုဆိုတာ ကျန်းမာရေးဌာနကပဲ လုပ်ရ မယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ လူတွေအားလုံး လုပ်ရ မယ့်ကိစ္စ။ လူတစ်ယောက် မကျန်းမာဘူးဆို တာ ကျန်းမာရေးဌာနကလုပ်လို့ မကျန်းမာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ-မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက် အောင်လုပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရာမှာ ကျန်းမာရေး ဌာနက ဆေးမစွဲအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီ တော့ ဘိန်းတွေစိုက်နေတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး တွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ဖြန့်ဖြူးနေတယ်။ ဒါတွေရှိနေရင် ဆေးစွဲတဲ့သူတွေရှိမှာပဲ။ အဲဒါ တွေကိုမထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့ စွဲလာတဲ့သူကိုမှ ဆရာ ဝန်တွေကုဆိုရင်၊ ဆရာဘယ်လောက်ကုကု ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးတွေ အလွယ်တကူနဲ့ဝယ်လို့ ရနေတာ။ ဒါတွေကိုကျတော့ မတားဘဲနဲ့ ကျန်း မာရေးဝန်ကြီးဌာနကကုပါဦးဆိုရင် ဆေးဖြတ် ပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေအိုသေသွားမယ်။ ဆေးစွဲ တဲ့သူက ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ကျန်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုမရှိရင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘယ်လိုမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။
Question::ဆရာ့အနေနဲ့ရော ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ် သက်ပြီး ဘာများ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြောကြား လိုပါသလဲ။
Answer::ကဏ္ဍတိုင်း၊ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ ဘာပဲလုပ် လုပ် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစတာတွေပါနေ တာ။ ဒီနေရာမှာ ဆည်ဆောက်ရင် ကျန်းမာ ရေးကဏ္ဍကိုစဉ်းစားရမယ်။ ဆည်ဆောက်ရင် လူတွေရွှေ့မယ်။ လူတွေရွှေ့လို့ ငှက်ဖျားရှိတဲ့ ဒေသကိုသွားရွှေ့မိရင် လူတွေ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်မယ်။ ဆည်ကြီးဆောက်လိုက်တယ်၊ နဂို က ရေမရှိတဲ့ နေရာတွေက ရေတွေရှိလာပြီး ခြင်တွေပေါက်လာပြီး ခြင်က တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ အရင်ကမရှိတဲ့နေရာမှာ ရှိ လာနိုင်တယ်။ ဒါဆည်ကိုပဲပြောတာပါ။ ဒီလိုပဲ ရွှေတူးတဲ့အခါ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါ ဒီစက်မှု လုပ်ငန်းက အညစ်အကြေးတွေ ရေ ထဲကိုစွန့်ပစ်ရင် ရေတွေညစ်ညမ်းပြီး လူတွေ ရောဂါရစရာဖြစ်မယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်ဌာန ကပဲ ဘာလုပ်လုပ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင် ကာကွယ်ရမယ်။လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်သလား။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်နိုင်သလား။ ဒါတွေ အားလုံးကို ဆက်စပ်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ကြ ဖို့လိုတယ်။ လက်ရှိပြဿနာတွေကိုတောင်မှ ဖြေရှင်းလို့မပြီးသေးဘူး။ ဥပမာ-ကလေးသေ နှုန်းလည်း ကျသင့်သလောက်မကျသေးဘူး။ အခြားရောဂါတွေကလည်း ရှိနေသေးတယ်။ ဖြစ်လာမှ ထလုပ်ရင် ကိုယ်က နောက်ကနေ အမြဲလိုက်လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်။
အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ။
I am rose, darling
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/19/20150အကြံပြုခြင်း
ဆိုင် ရှေ့ မှာ စား ပွဲ ချ ပီး ပုံ တွင် ပါ သော အ ဖွဲ့ မှ ပိုက် ဆံ ၄၇,၀၀၀/ကျပ် တောင်း
Lu Myo Nwe
ဒီ နေ့ ရန် ကင်း passport ရုံး မှာ ကျွန် တော့ passport သက် တမ်း ကုန် လို့သက် တမ်း သွား တိုး ရင်း တွေ့ကြုံ ခဲ့ ရ တဲ့ အ ဖြစ် အ ပျက် တစ် ခု ပါ . .. ရုံး ရှေ့ လမ်း ဘေး မှာ စား ပွဲ ချ ပီး လိမ်နေ သော အ ဖွဲ့အား မှတ် တမ်း တင် လာ ပါ တယ် .. ရိုး သား ပီး နား မ လည် သော နောက် လူ များ သော အ လိမ် ခံ ရ မှာ စိုး လို့ ပြန် လည် မျှ ဝေ ပေး တာ ပါ..( ဓာတ် ပုံ တွင် ပါ ရှိ သော အ ဖွဲ့ အ ပြင် တ ခြား အ ဖွဲ့တွေ လည်း ရှိ နိင် ပါ တယ် ) . Passport ရုံး က ရဲ များ လူ တွေ ကို ကိုင် တွယ် ဖြေ ရှင်း သင့် နေ ပါ ပီ ..
နယ် က လာ တဲ့ ကောင် လေး တစ် ယောက် ကို passport သက် တမ်း တိုး ဖို့ရုံး ထဲ အ စ စ အ ရာ ရာ လိုက် လုပ် ပေး မယ် ဆို ပြီး ကျွန် တော် လက် ဖက် ရည် သောက် နေ တဲ့ ဆိုင် ရှေ့ မှာ စား ပွဲ ချ ပီး ပုံ တွင် ပါ သော အ ဖွဲ့ မှ ပိုက် ဆံ ၄၇,၀၀၀/ကျပ် တောင်း တာ တွေ့လိုက် ပါ တယ် .. လို အပ် သော စာ ရွက် တွေ စီ ပေး ပီး ရုံး ထဲ ကို သူ တို့လူ နဲ့လွတ် လိုက် တာ တွေ့ပါ တယ် .သူ တို့လူ က အ ထဲ ရောက် တော့ ပျောက် သွား ပီး ကောင် လေး က လိုက် ရှာ တာ မ တွေ့တော့ ကျွန် တော် ဓာတ် ပုံ ရိုက် နေ တဲ့ အ ခန်း ထဲ က ရဲ တွေ ကိုလာ ပြော တယ် .. သူ့ကို ဘဏ် သွင်း ဖို့ငွေ ၂၅,၀၀၀/ ကျပ် ဘဲ plastic file ထဲ ထည့် ပေး လိုက် တယ် . ဘာ လုပ် ရ မ လဲ သိ လို့ပါ ဆို ပီး ပြော ပါ တယ် . . ရဲ တွေ က ကောင် လေး ကို ပြော တယ် "သူ တို နဲ့အ ပြင် က လူ တွေ မ ဆိုင် ကြောင်း နဲ့သွား ပြန် တောင်း ပါ ..မ ရ ရင် သူ တို့လိုက် ခဲ့ မယ် " ဆို ပီး ပြော ပီး သွားတောင်း ခိုင်း တယ် .. ကျွန် တော် passport ဓာတ် ပုံ ရိုက် ပီး လို့ပြန် ထွက် လာ တော့ ကောင် လေး ကို တွေ့လို့မေး လိုက် တော့ သူ တို့ကfile တွေ စီ ခ ၄၀၀၀/ ယူ ပီး ကျန် တဲ့ ငွေ တွေ ကို တော့ပြန် ပေး လိုက် တယ် .ရဲ တွေ လိုက် လာ မှာ ကြောက် လို့ထင် တယ် .. သိပ် ကျေ နပ် ပုံ မ ရ ဘူး တဲ့.. ကျွန် တော် လည်း မ သိ မ သာ အဲ ဒိ အ ဖွဲ့ နား က လမ်း ဖြတ် လျောက် ရင်း ဓာတ် ပုံ ရိုက် လာ ခဲ့တယ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/17/20150အကြံပြုခြင်း
မြန်မာဘောလုံး အသင်း ဒီထက်ဖွုံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက့် ပြောထားတာ အရမ်းထိတယ်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး အနီး၃၃ ထပ်ကွန်ဒို မတည်ဆောက်ရေး အဆိုပယ်ချခံရ
မနေ့က ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်မှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး အနီးတ၀ိုက်တွင် Dagon City one ဟု အမည်ပေးထားသော ၃၃ ထပ်ပါ အဆင်မြင့် ကွန်ဒို စီမံကိန်းကြီး တည်ဆောက်ရေး အဆိုကို ဒေါ်ညိုညိုသင်းမှ တင်သွင်းသော ကန့်ကွက်သည့် အဆိုကို တပ်ပိုင်မြေ ဖြစ်၍ တိုင်းလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးရန် မလိုဟု ဆိုကာ တညီတညွတ်တည်း ပယ်ချခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။
တတ်သိ ပညာရှင်များ အပါအ၀င် မြန်မာနိူင်ငံတ၀ှမ်းရှိ ရဟန်းရှင်လူ အပေါင်းတို့၏ အထူးစိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရမှုအတွက် ဒေါ်ညိုညိုသင်းမှ ဦးဆောင်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း အရေးတယူ လုပ်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ပင် မရှိဟု သိရသည်။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရသနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းအား လှစုမြတ် (ဗိသုကာ) မှ ပြည်သူ့ဂျာနယ်တွင် ရေးသားထားသော အချက်အလက်အချို့ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
‘ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး တည်ဆောက်ထားရှိပုံ
ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်က စေတီအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် ရှေးရိုးရာ နည်းများကို အသုံးပြု၍ အုတ်များဖြင့်သာ မြေမာရှိသော နေရာတွင် အုတ်မြစ်မြေ အ၀င်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထားရှိ၍ တည်ဆောက်လေ့ ရှိပါသည်။ ရှေးအဆောက်အအုံများ၏ အဓိက အုတ်မြစ်တည်ရှိပုံမှာ အောက်ခံမြေသားအမာပေါ်တွင်သာ မှီတည်၍နေရပါသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး တည်နေပုံမှာလည်း ဤကဲ့သို့ပင် တည်ရှိမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ရေရှည် တည်တံ့စေရေးအား ထိခိုက်နိင်သော အကြောင်းများ
အထက်ပါကဲ့သို့ စေတီတည်ထားနိုင်မူကြောင့် သိဂုင်္တ္တရကုန်းတော်၏ အောက်ခံမြေသားများ ပြောင်းလဲ ကျုံ့ကြွမှု မရှိရန် အရေးကြီးလှပါသည်။
သိဂုင်္တ္တရကုန်းတော်ရှိ ရေမြေဂေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိသော သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲခြင်းနှင့် ကုန်းတော်အနီး မြေကြီးအတွင်းသို့ ရေစိမ့်မ၀င်နိုင်သော ကွန်ကရစ်ခင်း ဧရိယာ များပြားလာခြင်း။
ရန်ကုန်မြို့တစ်ဝန်း ပြောင်းလဲ ဖွံ့ဖြိုးလာသော လူနေ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ၏ အလေးချိန် မြေကြီးထု ခံနိုင်ရည်ထက် ကျော်လွန်လာနိုင်ခြင်း။
လူနေ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ၏ မြေအောက် ထပ်များ ဆောက်လုပ်မှု၊ အဆောက်အအုံများမှ သဘာဝ မြေများကို ဖုံးလွှမ်းလာမူ၊ ကွန်ကရစ်ခင်း ဧရိယာ များပြားလာမှုများကြောင့် မြေကြီးအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သင့်သော ရေပမာဏ မစိမ့်ဝင်နိုင် တော့ခြင်း။
မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူ သုံးစွဲမှု များပြားလာခြင်း။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်အနီး ၀န်းကျင်တွင် ဆောက်လုပ် နေသော အဆောက်အအုံများအား ဆောက်လုပ်မှုစနစ် အထိန်းအကွပ် မရှိ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပါက စတင် ဆောက်လုပ်စဉ်နှင့် နောင်နှစ် ၇၀-၁၀၀ သက်တမ်း ကုန်သွားသော အဆောက်အအုံများ ဖြိုဖျက်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် တုန်ခါမှုများ။
စသည်တို့ကြောင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး တည်ရှိသော ကျောက်လွှာမြေသည်ပင် ဂေဟစနစ် ပျက်ယွင်းကာ ကျုံ့ကြွမှုများ၊ ရွေ့လျားမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ယခု ပါဝင်ပါတ်သက်နေကြသော ကုမဏ္ကီ (၄) ခုသည် ငွေရေးကြေးရေးအရ လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူများကို မည်မျှထိ သြဇာ လွှမ်းမိုးထားသနည်း၊ အဆိုပါ ကုမဏ္ကီများသည်ကော ကာတာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗီးယား အစရှိသည့် နိူင်ငံများ၏ နောက်ကွယ်မှ ငွေကြေးထောက်ပံမှု ရရှိ လုပ်ကိုင်နေခြင်းလော စသည့် အချက်များသည် သက်သေ အထောက်အထား မရရှိသေးသော်လည်း မဖြစ်နိူင်ဟု ပါယ်ချရန် အလွန်ခက်ခဲလှသည်။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အတွက်အထွတ်မမြတ်ထားရာ နောက်ဆုံး ခံတပ်ကြီးလည်း ဖြစ်သဖြင့် လူထုအနေဖြင့် သားစဉ်မြေးဆက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားရေးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
အတွက် သမိုင်းပေး တာဝန်တရပ် ဖြစ်လာနေပေပြီ။
သို့အတွက် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ မှ အောက်ပါအတိုင်း အထူးကြေငြာချက်ထုတ်ကာ မိမိတို့ တတ်နိူင်သည် နည်းဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်ကို တင်ပြပါတယ်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၇)ရက်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါရန် နှိုးဆော်ခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ သိဂုင်္တ္တရကုန်းတော်ပေါ်တွင် တည်ထားသည့် ရွှေတိဂုံဆံတော်ရှင်စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
သာမက မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး၏ နှလုံးသည်းပွတ်သဖွယ် တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူ အပ်သော မြန်မာပြည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံတကာမှခရီးသွားများ တန်ဖိုးထား လေ့လာရသည့် လှပအံ့သြဖွယ် နေရာဒေသတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ (၁၆၃)ဧက ကျယ်ဝန်းသော တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ
နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သိဂုင်္တ္တရကုန်းတော် ဝတ္တကမြေကို ဘုရင်မကြီးရှင်စောပု က လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပြီး ထိုနယ်မြေကို အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့က စစ်စခန်းချရာတွင် ကန်တိုမင်(Cantonment) ဧရိယာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ရာမှ ဂျပန်ခေတ်တွင်လည်း စစ်စခန်းများအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ထို့နောက် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်
တွင်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်က စစ်ရုံးများဖွင့်လှစ်ကာ ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ခြင်း
ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းတန်ဖိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် တန်ဖိုးကြီးမားလှသော ရွှေတိဂုံ
စေတီတော်မြတ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် စေတီတော်၏ တစ်မိုင်ပတ်လည် ဧရိယာအတွင်းတွင် အထပ်မြင့်အဆောက်အဦများ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေနိုင်သော လုပ်ဆောင်မှုမျိုးများကို မလုပ်ဆောင်ကြရန် တားမြစ်ထားကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
သို့သော်လည်း ယခုအခါ သိဂုင်္တ္တရကုန်းတော်နယ်နမိတ်ဖြစ်သော စစ်ရုံးနယ်မြေ
ဧရိယာ (၂၂)ဧက တွင် Dagon City One စီမံကိန်းကြီးအပါအဝင် ကုမ္ပဏီ ၄ ခုက အဆင့်မြင့်လူနေတိုက်ခန်း မြောက်မြားစွာနှင့် ရုံးခန်း၊ ဈေးဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အခြားအစီအစဉ်များစွာပါဝင်သော တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကြီးကို စတင်
ထိုစီမံကိန်းကြီးစတင်သည်နှင့် သိဂုင်္တ္တရကုန်းတော်မြေဆီလွှာနှင့် ရေဝေရေလဲ
သဘာဝကို ထိန်းညှိပေးနေသော သစ်ပင်ကြီးများစွာတို့မှာ ခုတ်လှဲဖျက်ဆီးခြင်း
ခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။နိုင်ငံတကာမြို့တော်များတွင် သဘာဝသစ်ပင်မရှိသဖြင့် အစိမ်းရောင်ဒေသ တောအုပ်တုများ ဖန်တီးနေရသည့်ဖြစ်ရပ်နှင့် ဆန့်ကျင်စွာ ရှိပြီးသားသဘာဝသစ်ပင်များကို ခုတ်လှဲဖျက်ဆီးပစ်နေသော မြို့ပြစီမံကိန်းမျိုးသည် ရန်ကုန်မြို့တော်နှင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် တူနေပါသည်။
ထို့ကြောင့် Dagon City One စီမံကိန်းကို ရွှေတိဂုံစေတီတော်အနီးတွင် ဆက်လက်
မလုပ်ဆောင်ရန် (သို့မဟုတ်) နေရာပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရွက်ရန် ဤ အထူးကြေညာ
ချက်ကို ထုတ်ပြန်ကာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အများပြည်သူသိရှိနိုးကြားစေရန် ထုတ်ပြန်
ဖုန်း-၀၉ ၅၁၇၀ ၃၅၂ ၊ ၀၉ ၄၀၃၇ ၆၈၅ ၉၅ ၊ ၀၉ ၅၀ ၉၆၈၂၉ ၊ ၀၉ ၅၁၂ ၇၃၃၀၊
၀၉ ၇၃၁ ၅၁၉၂၂ ၊ ၀၉ ၂၅၈ ၂၃၉၉၆၉၊
၀၉ ၇၉၃ ၄၄၀ ၉၆၉။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/10/20150အကြံပြုခြင်း
အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၁၂၃၀ အထိ စံချိန်တင်မြင့်တက်
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိတ်ဆို့မည်ဆိုပါက အခါတစ်ရာပိတ် ဂရုမစိုက်ဘူးဟူသော မှတ်ချက်စကား ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း တစ်ရက်အတွင်း ၃၅ ကျပ် မြင့်တက်သွား
ဇွန် ၉ ရက်တွင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၁၂၃၀ အထိ စံချိန်တင် မြင့်တက်သွားကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလဆန်းပိုင်းမှစ၍ ဆက်တိုက်မြင့်တက်လာသော ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းသည် ဇွန် ၈ ရက်က ပြုလုပ်သော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သောမှတ်ချက်စကား ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမှာ တစ်ရက်အတွင်း ၃၅ကျပ် မြင့်တက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဇွန် ၈ ရက်က ပြုလုပ်သော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက “....၄ ရက်နေ့ကျတော့ မစ်မက်ကော်နယ်က ဘာပြောလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲက လူထုဆန္ဒ မထင်ဟပ်ဘူးဆိုရင် တပ်မတော်နဲ့ ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားသွားနိုင်တယ်။ စီးပွားရေး ပျက်ပြားသွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူး။ လူထုဆန္ဒ မထင်ဟပ်ဘူးဆိုတာ ဘာတိုင်းတာတာလဲ။ သူနိုင်စေချင်တဲ့ပါတီ မနိုင်လို့ လူထုဆန္ဒ မထင်ဟပ်ဘူးဆိုရင် ဒီဟာမျိုးကျတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ သူနိုင်စေချင်တဲ့ပါတီ နိုင်တာဟာ လူထုဆန္ဒ ထင်ဟပ်တယ်လို့ သဘောထားရင် NO ပဲ။ ဘယ်ပါတီ နိုင်နိုင် လူထုသဘောထားအတိုင်းပဲ ဖြစ်ရမယ်။ သူ နိုင်စေချင်တဲ့ ပါတီမနိုင်ရင် လူထုသဘောထား မထင်ဟပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မြန်မာပြည်ကို ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုရင် အခါ ၁၀၀ ပိတ် ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ဘူး...” ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/10/2015 1 အကြံပြုခြင်း
ပြည်သူပိုင်ငွေကိုယ့်အကောင့်နဲ့ဖွင့်လို့ ရတဲ့တိုင်းပြည်
မန္တလေးမြို့လယ်ရှိ ဘဏ်တစ်ခုတွင် ထောင်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု
၂၀၁၄-၂၀၁၅ တနိုင်ငံလုံးပထမ ညီအစ်မနှစ်ယောက်
မဲစာရင်း မမှန်ပါကမဲလိမ်၊ မဲခိုးသည့် ပြဿနာများဖြစ်န...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒခ...
ဆိုင် ရှေ့ မှာ စား ပွဲ ချ ပီး ပုံ တွင် ပါ သော အ ဖွ...
မြန်မာဘောလုံး အသင်း ဒီထက်ဖွုံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက...
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး အနီး၃၃ ထပ်ကွန်ဒို မတည်ဆောက်ေ...
ပြည်သူပိုင်ငွေကိုယ့်အကောင့်နဲ့ဖွင့်လို့ ရတဲ့တိုင...